'Shororkeessummaan taayitarra turuuf uummata dararuu dabalata' - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Mummee Itoophiyaa Dr Abiy Ahimad ibsa gaaffiiwwan miseensota mana maree bakka bu'oota biyyattiif har'a taasisaniin, shororkeessummaan taayitaarra turuuf jecha ummata dararuu dabalata jedhaniiru.
Ministirichi mata dureewwan haala yeroo biyyattiin keessatti argamtu ilaalattan garaa garaa ilaalchisuun ibsa kan taasisan yoo ta'u, shororkeessummaan jechuun taayitaarra turuuf jecha aangootti fayyadamuun nama reebuu, dukkana keessatti nama hidhuu, qaama hir'isuu fi kkf akka dabalatu jedhaniiru.
Itti dabaluunis shororkeessummaan isa ummata miidhu malee ummata miidhamu akka hintaane ibsaniiru.
Gaaffii miseensota paarlaamaatiin, namootni yakka shorokeessumaan himataman maaliif gadhiifamu jechuun gaafataniifis, muummichi ministeeraa Dr Abiy Ahimed deebii yommuu kennan, namootni yakka shororkeessuummaan hidhamanii turan haala seeraa fi heera biyyittii hin cabsineen dhiifamaan gadhiifaman jedhan.
''Akka dhaabaatti yoo tahe malee namni akka dhuunfaatti shororkeessaa jedhamu hin jiru. Namni shororkeessummaan shakkamee itti murtaa'ees guyyaa murtee irratti darbe sanaa kaasee shororkeessaa osoo hin taane sirreefamaa jedhamee waamamas'' jedhaniiru.
Heerri Itoophiyaa dhaabbilee dhimmoota nageenyaas tahe humni waraanaa paartiirraa karaa walaba taheen hundaa'uu qabuu jedha. Nuyi garuu bifa akkasiin miti kan hojiirra oolchine jedhan ministirri muummichaa.
Poolisiin uummata reebaa akka ture koomishiniin mirga namoomaa qorannoo gaggeessee ture. Poolisiin akkasii ofiisaatiin shororkeessaadha. Kanaafuu mootummaanis dhimmicha qoratee madaaluun kan uummata dhiifama gaafate jedhaniiru.
Gochaan akkasii dhaabbatee dhiifamaan seenaa biyya keessaaf hafuu qaba. Dabalataan waraanni qabsoo faashiniin isaa itti darbe waan taheef Dhaabbileen akka ABO fi Ginbot 7 gara biyyaatti dhufuu qabu.
Wayita ammaa kanattis Itoophiyaaf kan barbaachisu rasaasa qisaasessuu miti kan jedhan ministirichi, nuyis akka mootummaatti yakka heera biyyaa cabse hin hojjenne jechuu miti jedhaniiru.
Uummatni nuufis dhiifama godhe isaanifis dhiifama ni taasisa. wal ajjesanii taayitaa qabachuun bu'aa hin qabu jedhaniiru.